पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लिएको एमडी र एमएसको प्रवेश परीक्षा रद्द - News Birat
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लिएको एमडी र एमएसको प्रवेश परीक्षा रद्द
पोखरा, फागुन ११–पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको स्नातकोत्तर प्रवेश तहको परीक्षा रद्द भएको छ । परीक्षा समितिले आइतबार सूचना निकालेर एमडी र एमएस (स्नातकोत्तर) तहको प्रवेश परीक्षा रद्द भएको जनाएको हो । शनिबार भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र ढिलो बाँडेको र प्रश्नपत्र पहिल्यै बाहिरिएको भन्दै करिब ५ सय डाक्टरले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । त्यसै राति अबेरसम्म परीक्षा समितिको बैठक बसेको थियो ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन प्रा.डा. नरेन्द्रविक्रम गुरुङले प्राविधिक कारणले परीक्षा रद्द गरिएको बताए । ‘परीक्षा समितिको बैठकले विशेष कारणले परीक्षा रद्द गरेको छ,’ उनले भने, ‘समितिको विशेष बैठक त्यही दिन राति ११ बजे बसेर परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।’ प्रवेश परीक्षाको नयाँ मिति समितिको बैठकले तय गर्ने जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका लागि १ हजार विद्यार्थीले परीक्षा फर्म भरेका थिए। तर, परीक्षा निर्धा्रित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो सुरु भएपछि विद्यार्थीहरूले परीक्षा बहिष्कार गरेको परीक्षार्थी डा. हुलास अग्रवालले जानकारी दिए ।
आईतवार, ११ फाल्गुन २०७६, २१:२३ February 23, 2020 मा प्रकाशित